संगीतमा राजनीतिक प्रभाव - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
संगीतमा राजनीतिक प्रभाव
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७०, मंगलवार
सङ्गीत प्रिय विषय अर्थात् सबैको हृदयको आभास । किनकी एक जना स्रष्टाले आफ्नो हृदयको कल्पना वा यथार्थतालाई सङ्गीत मार्फत् थुप्रै श्रोताहरुको माझमा प्रस्तुत गर्न खोजेको हुन्छ तर जब उसले प्रस्तुत गरिदिएको विषय श्रोतामाझमा पुग्दछ । त्यो कुनै एक राष्ट्रको मात्रै नभएर थुप्रै श्रोताहरुले प्रिय सिर्जना बन्न सफल हुन्छ । सङ्गीत आफैंमा एक कोमल विषय हो । सङ्गीत हृदयबाट स्वतःस्फूर्त प्रस्फुटित विषय भएका कारण एउटा स्रष्टाले केवल आफ्नो भावना प्रस्तुत गरिदिएको विषय पनि धेरैको हृदयको ढुकढुकी अर्थात् मीठो रोजाईको पाटो पनि बनिरहेको हुन्छ । कुनै पनि एउटा स्रष्टाले सिर्जना गरेको गीत सङ्गीत धेरै श्रोताहरुलाई थाहै हुँदैन कि उक्त गीतमा रचनाकार को हो ? सङ्गीतकार को हो ? अनि गायक वा गायिका को हो ? यी सबै व्यक्तिहरुको पहिचान नभएता पनि श्रोताहरुले अत्याधिक आनन्द लिएर गीत सङ्गीत सुनिरहेका हुन्छन् । एउटा असल स्रोताले गीत सङ्गीत सुनेर आफूलाई आनन्द आइरहेको विषयभित्रका स्रष्टाहरु को को हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदा साह्रै राम्रो मानिन्छ । तर कसैले स्रष्टाहरुको पहिचान विना नै उसले गीत सङ्गीत सुन्नु र आनन्द लिनुमा उसको कुनै ठूलो अपराध वा भूल हो भन्न सकिँदैन ।
सङ्गीत र फूल उस्तै उस्तै हुन् जस्तो लाग्दछ । किनकी सङ्गीत सबैलाई मन पर्दछ । त्यसैगरी फूल पनि सबैलाई मन पर्दछ । सङ्गीत कोमल हुन्छ अनि फूल पनि कोमल हुन्छ । र त सबैलाई दुवै चिज मन पर्दछ । सङ्गीत र फूल म नपराउने मानिस कठोर स्वभावको हुन्छन् । त्यो पनि अपवादकै रुपमा मात्रै भेटिन्छन् । फरक यति मात्रै हो की सङ्गीत र फूल आफ्नो आफ्नो रोजाइका हुन सक्दछन् । सबैलाई सबै मन पर्दछन् भन्न सकिँदैन । कसैलाई कुन मन पर्दछ भने कसैलाई कुन मन पर्दछ । रोजाइका पाटा आ–आफ्नै हुन सक्दछन् । कसैलाई लोक सङ्गीत, कसैलाई आधुनिक सङ्गीत, कसैलाई शास्त्रीय सङ्गीत, कसैलाई पप सङ्गीत, कसैलाई रक सङ्गीत मन पर्दछ । कसैलाई पूर्वीय सङ्गीत मन पर्दछ भने कसैलाई पाश्चात्य शैलीका सङ्गीतहरु म्न पर्दछ । यी पनि श्रोताहरुको रोजाइका पाटा हुन सक्दछन् । त्यसैगरी फूलहरु पनि सबैलाई सबैथरीका मन पर्दछन् भन्न सकिँदैन । मन परेका मध्येमा पनि अलि बढी मन पर्ने हुन सक्दछन् । कसैलाई लालीगुराँस मन पर्न सक्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्न सक्दछ अनि कसैलाई चमेली मन पर्न सक्दछ भने कसैलाई लालुपाते मन पर्न सक्दछ । गीत सङ्गीतमा आ–आफ्ना रोजगाइका विविधता हुनु स्वाभाविक कुरा नै हो ।
सङ्गीत सबैको साझा विषय बन्न सक्नु वा बनाउन सक्नु त्यस सिर्जनामा संलग्न स्रष्टाहरुको खुबीको कुरा हो । सिर्जना कति खुम्चिने र कति फैलिने भन्ने कुरा उक्त सिर्जनामा आबद्ध स्रष्टाहरुमै भर पर्दछ । सिर्जना खुम्चिने र फैलिने कुरा पनि स्रष्टाकै सोचाइ वा विचारमा भर पर्दछ । स्वयम् स्रष्टाले आफ्नो सिर्जनालाई सीमित घेराभित्र राख्न खोज्यो भने खुम्चिन सक्दछ अनि सीमारेखा विहीन बनाउन खोज्यो भने फैलिन्छ । कतिपय स्रष्टाहरुले गीत सङ्गीत सीमाहिन विषय हो भन्ने थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै पनि आफ्नो केवल क्षणिक स्वार्थका लागि सीमारेखाभित्र बाँधिन खोजेका वा बाँधिएको पाइन्छ । यी यस्ता कामहरु स्रष्टाहरुका केही बाध्यता र विवशताका कारणले भएका हुन सक्दछन् भने केही विचारले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्दछ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली गीत सङ्गीतमा राजनैतिक प्रभाव परेको प्रष्ट रुपमा देख्न पाइयो । विशेषतः संविधानसभाको निर्वाचनका अवसरमा नेपाली सङ्गीतमा अझ बढी प्रभाव परेको देखियो । सङ्गीत सीमारेखाविहीन विषय हो भन्ने ज्ञान हुँदा हुँदै वा कतिलाई ज्ञान नभएका कारण खुलेआम प्रभावित भएको देखियो । प्रभावित हुनुमा कतिको भविश्यमा केही लोभलालच नै बढी हावी भएको नै हुनु पर्दछ भने कति लहलहैमा पछाडि लागेको हुनु पर्दछ । नेपाली सङ्गीतमा आफूलाई माथिल्लो स्थानमा देखाउन चाहने र ती सङ्गीतकर्मीहरु जो सबैका साझा र राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन् उनीहरु आफ्नो धरातल विर्सिएर केवल क्षणिक आवेशमा उफ्रिएको हाँस्यास्पद अभिनयहरु छरपस्ट भएको देखियो । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा साझा ठानिएकाहरु खुलेआम रुपमा एउटा निश्चित सिद्धान्तभित्र खुम्चिनु, उनकै झोला बोक्नु, उनकै झण्डा बोक्नु र केवल एउटा विचराको पछाडि दौडिनु केवल क्षणिक आवेग हो र नेपाली सङ्गीतलाई राजनीतिले पारेको प्रभाव हो भन्ने नबुझ्नु कमजोरी नै हो । कुनै विचारले जित्नु र कुनै विचारले हार्नु मात्रै ठूलो कुरा भएन सङ्गीतकर्मीहरुका लागि राष्ट्रिय जित भयो की भएन यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
हजारौं नेपाली सङ्गीतकर्मीहरु केवल नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुका भोट माग्ने सरल र कोमल माध्यम मात्रै त भएनन् ? यो विषयमा सङ्गीतकर्मीहरुले सोच्नु पर्ने विषय हो । आफ्नो फराकिलो विचारलाई खुम्च्याएर केवल एउटा सिद्धान्तको झोला र झण्डामा आश्रित भएर देशभरि दौडिएता पनि कुनै एकजना कलाकारको दौडमा विजय नहुनु दुखद् कुरा हो । आफ्नो क्षेत्रलाई विशिष्ट बनाउने तिर लाग्नुभन्दा पनि केवल हावादारी रुपमा एउटा विचारको रंगीन जुलुस गर्नुले भविश्यमा के कति महत्व राख्दछ ? एउटा सबैको साझा ठानिएका सङ्गीतकर्मीहरु अनि सबैको साझा ठानिएको सङ्गीत क्षेत्र केवल एउटा राजनैतिक विचारबाट प्रभावित हुनु दुखद् कुरा हो । हिजोसम्म समग्र रुपमा हाम्रो सङ्गीत भन्नेहरु आज राजनैतिक प्रभावका कारण यो तेरो सङ्गीत र त्यो मेरो सङ्गीतका नाममा बदलिएका छन् । यसरी साझा विषयवस्तु तेरो र मेरोमा विभाजन हुनु र सङ्गीतकर्मीहरु राजनैतिक विचारमा प्रभावित भएर आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बिर्सिएर कसैको विचारको रंगीन टीकामा रमाउनु । कसैको रसिद भित्र रमाउनु । कसैको झण्डा फरपराउनु कसैको झोला बाँधिन दुखद् कुरा हो । राजनैतिक कारणले नेपाली सङ्गीतमा परेको प्रभावको बारेमा एक पटक समग्र रुपमा बाहिरिएर संगीतकर्मीहरुले सोच्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
महामारी जितेर मृत्युसँग हारेका सांगीतिक योद्धा राम धामी
संगीत क्षेत्रमा लाग्नेको भविश्य उज्ज्वल छः गायक सञ्जय गुरुङ
सङ्गीतमा अब्बल, साहित्यमा अकल्पनीय क्षमताका दिनेश
‘लकउडाउन’ सदुपयोगः एक वर्षलाई पुग्ने सिर्जना
शिक्षामा संगीत र जीवन
‘कृष्ण–लीला’ को दोश्रो गीतको यस्तो चर्चा